دسته‌بندی نشده Archives - صفحه3از 41 - اموزش یک
د بورې درملنه – د عادتونو له مینځه وړلو او د لمسونو په ایستلو سره
د بد خواړو عادتونو سره د بدن درملنه خراب رژیم سربیره د داسې شرایطو رامینځته کولو وړتیا لکه د التهاب او د معدې درد کولی شي زموږ رواني حالت باندې اغیزه وکړي ، د داسې حالتونو لامل کیږي لکه خارش ، مزاج بدلیږي ، وینځل کیدنه ، تیری ، قهر یا نور ډیر څه. فعال …
ادامه ی نوشته د بورې درملنه – د عادتونو له مینځه وړلو او د لمسونو په ایستلو سره
برچسب‌هابې شرمهخپګان	دیدگاهتان را دربارهٔ د بورې درملنه – د عادتونو له مینځه وړلو او د لمسونو په ایستلو سره بیان کنید
Tratamento do tédio – eliminando hábitosetoques finais
Tratamento do tédio com maus hábitos alimentares Uma dieta ruim, além de poder criar condições como náuseaedor abdominal, pode afetar nosso estado mental, causando condições como irritabilidade, alterações de humor, descentralização, agressão, raiva ou mais Torna-se ativo. Se você sofre de alterações de humor, liste os alimentos que você come ao longo do …
ادامه ی نوشته Tratamento do tédio – eliminando hábitosetoques finais
برچسب‌هاSem vergonhasem vergonha restaurante lisboa	دیدگاهتان را دربارهٔ Tratamento do tédio – eliminando hábitosetoques finais بیان کنید
Liječenje dosadom – uklanjanjem navika i završavanjem dodira
Liječenje dosadom loših prehrambenih navika Loša prehrana, osim što može stvoriti uvjete poput mučnine i bolova u trbuhu, može utjecati na naše mentalno stanje, uzrokujući stanja poput razdražljivosti, promjene raspoloženja, decentralizacija, agresivnost, bijes ili više Postaje aktivna. Ako patite od promjene raspoloženja, nabrojite hranu koju jedete tijekom dana kako biste saznali odnos između hrane koju …
ادامه ی نوشته Liječenje dosadom – uklanjanjem navika i završavanjem dodira
برچسب‌هاberamno hrbersama sinonimbesramnicibesramno glasovna promjenabesramno ili besramnobesramno niski cenibesramno njemackibesramno prijevodbesramno znacenjebesramnost znacenje	دیدگاهتان را دربارهٔ Liječenje dosadom – uklanjanjem navika i završavanjem dodira بیان کنید
Лечение на скука – Елиминирайки навиците и завършвайки докосванията
Лечение на скуката на лоши хранителни навици Лошата диета, освен че може да създаде условия като гадене и болки в корема, може да повлияе на психическото ни състояние, причинявайки състояния като раздразнителност, промени в настроението, децентрализация, агресия, гняв или други Става активен. Ако страдате от промени в настроението, избройте храните, които ядете през целия ден, …
ادامه ی نوشته Лечение на скука – Елиминирайки навиците и завършвайки докосванията
برچسب‌هاнетерпениенетерпение бгнетерпение енетърпение антонимнетърпение как се пишенетърпение на английскинетърпение на българскинетърпение правописнетърпение превод английскинетърпение синонимнетърпение синоними	دیدگاهتان را دربارهٔ Лечение на скука – Елиминирайки навиците и завършвайки докосванията بیان کنید
Лячэнне нуды – шляхам выключэння звычак і фінішных штрыхаў
Лячэнне нуды ад шкодных звычак харчавання Дрэнная дыета, акрамя магчымасці выклікаць такія станы, як млоснасць і боль у жываце, таксама ўплывае на наш псіхічны стан, выклікаючы такія стану, як раздражняльнасць, перапады настрою, недастатковая канцэнтрацыя, агрэсія, гнеў і іншае Актывізуецца. Калі вы пакутуеце ад перападаў настрою, пералічыце прадукты, якія вы ясьце на працягу дня, каб даведацца …
ادامه ی نوشته Лячэнне нуды – шляхам выключэння звычак і фінішных штрыхаў
برچسب‌هاБессаромнаяДэпрэсія	دیدگاهتان را دربارهٔ Лячэнне нуды – шляхам выключэння звычак і фінішных штрыхаў بیان کنید
ကုသမှုဂေးပျင်း – အလေ့အထများကိုဖျက်ဆီးနဲ့ထိပြီးအားဖြင့်
ထိုကဲ့သို့သောပျို့နှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အဖြစ်အခြေအနေများဖန်တီးနိုင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်, မကောင်းတဲ့ဂေးမကောင်းတဲ့အလေ့အထအစားအသောက်များတွင်ပျင်းကုသမှုထိုကဲ့သို့သောယားယံခြင်း, စိတျအပွောငျးအလဲ, အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်း, ကျူးကျော်, အမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကြောင့်အကြောင်းမရှိအခြေအနေများအပေါ်သက်ရောက်မှု activated ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစိတျအပွောငျးအလဲအနေဖြင့်ဆင်းရဲခံရလျှင်, သင်တစ်နေ့တာအတွင်းစားသောအစားအစာများကိုမဖော်ပြအစားအစာအကြားဆက်ဆံရေးကိုလောင်နှင့်သင့်စိတျအပွောငျးအလဲရှာပါ။ ကုသမှုပျင်းဂေး အိမ်ရာစီမံကိန်း သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အပေါ်တစ်ဦးအကြီးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျြောရှငျနဲ့ပျြောရှငျအိမ်ပုံစံဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိုလျှင်။ အဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖန်တီးနေချိန်မှာဥပမာ, အနီ, လူတွေစိတ်တိုခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစေနိုင်သည်။ သုတေသနကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောရှုခင်းများအဖြစ်စိတ်ပြေလျော့သွားပုံများ, အသုံးပြုခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မငြိမ်မသက်မှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မည်ကွောငျးဖျောပွ။ ကုသမှုပျင်းဂေး တိုးတက်မှု ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအလုပ်မှာမြှင့်တင်ရေး၏အိပ်မက်မက်ပေမယ့်တကယ်တော့ကျနော်တို့အလားအလာမဟုတ်ပါထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Warwick တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများဟာအလုပ်သမားရာထူးတိုးသောအခါသူစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး၏ပမာဏအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုနိဂုံးချုပ်ဖို့လာကြပြီ။ ကုသမှုပျင်းဂေး ရာဘေးအလင်းအိမ် သင်မှန်မှန်အိပ်ရာထဲမှာတီဗီသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းကိုကြည့်လျှင်, နောက်နေ့သင့်ရဲ့အာရုံကြောများနှင့်ခံစားချက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါ။ သုတေသနညမှာအလင်းက melatonin များ၏ထုတ်လုပ်မှုမှတစ်ဦးအတားအဆီး, ခံစားချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုဟော်မုန်းလူဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ melatonin သာမှောင်မိုက်၌ထုတ်လုပ်ဒါကြောင့်အပေါငျးတို့သမီးလုံးချွတ်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အထူကုလားကာကြိုးစားကြသည်။ ကုသမှုပျင်းဂေး အာဟာရ 5. မရှိခြင်း အဲဒီမှာစိတ်ကျရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောများစွာသောအချက်တွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားအသောက်လည်းစိတ်ကျရောဂါပိုမိုဆိုးရွားသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် D ကိုမရှိခြင်း, ဗီတာမင် B နဲ့ Omega-3 fatty acids စိတ်ကျရောဂါနှင့်အကြောင်းမရှိပရမ်းပတာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစားအစာတွင်ဤအာဟာရစမ်းပါ။ ကုသမှုပျင်းဂေး သူငယ်ချင်းများ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းကောင်းသောရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အရာအားလုံးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မူတည်သည်ဟုမယူဆပါနဲ့။ …
ادامه ی نوشته ကုသမှုဂေးပျင်း – အလေ့အထများကိုဖျက်ဆီးနဲ့ထိပြီးအားဖြင့်
برچسب‌هاစိတ်မရှည်ခြင်း	دیدگاهتان را دربارهٔ ကုသမှုဂေးပျင်း – အလေ့အထများကိုဖျက်ဆီးနဲ့ထိပြီးအားဖြင့် بیان کنید
Aspertze tratamendua – Ohiturak ezabatuz eta ukituak eginez
Elikadura ohitura txarren tratamendu aspergarria Dieta txarrak, goragaleak eta sabeleko mina bezalako baldintzak sortzeko gai izateaz gain, gure buruko egoeran eragina izan dezake eta sinesgarritasuna, aldarte aldaketak, deszentralizazioa, erasoa, haserrea edo gehiago bezalako baldintzak sor ditzake. Aktibo bihurtzen da Umore aldaketak jasaten badituzu, zerrendatu egun osoan zehar jaten dituzun elikagaiak, jakiteko jaten dituzun elikagaien eta …
ادامه ی نوشته Aspertze tratamendua – Ohiturak ezabatuz eta ukituak eginez
برچسب‌هاezinegonak	دیدگاهتان را دربارهٔ Aspertze tratamendua – Ohiturak ezabatuz eta ukituak eginez بیان کنید
Ọgwụgwọ ụfụ – Site na iwepụ omume na imecha mmetụ ahụ
Ọgwụ ọjọọ banyere iri nri na-adịghị mma, iri nri, na mgbakwunye na inwe ike ọnọdụ ndị dị ka ọgbụgbọ na mgbu afọ nwere ike imetụta ọnọdụ uche anyị, na-akpata ọnọdụ dịka mgbakasị ahụ, mgbanwe ọnọdụ, enweghị nchịkwa, iwe, iwe ma ọ bụ karịa Ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ n’ihi ọnọdụ mgbanwe, …
ادامه ی نوشته Ọgwụgwọ ụfụ – Site na iwepụ omume na imecha mmetụ ahụ
برچسب‌هاEnweghị ihereObi erughị ala	دیدگاهتان را دربارهٔ Ọgwụgwọ ụfụ – Site na iwepụ omume na imecha mmetụ ahụ بیان کنید
Leiðindi meðferð – Með því að útrýma venjum og klára snertingu
Leiðindi meðferð á slæmum matarvenjum Slæmt mataræði, auk þess að geta skapað aðstæður eins og ógleði og kviðverkir geta haft áhrif á andlegt ástand okkar og valdið aðstæðum eins og pirringi, sveiflum í skapi, valddreifingu, árásargirni, reiði eða fleiru Verður virkur. Ef þú þjáist af skapsveiflum skaltu skrá matinn sem þú borðar allan daginn til …
ادامه ی نوشته Leiðindi meðferð – Með því að útrýma venjum og klára snertingu
برچسب‌هاSkömmlausÞunglyndi	دیدگاهتان را دربارهٔ Leiðindi meðferð – Með því að útrýma venjum og klára snertingu بیان کنید
Cóireáil Boredom – Trí dheireadhachur le nósanna agus baint deiridh
Déileáil go hannamh le droch-nósanna itheacháin Is féidir le droch-aisteoireacht, chomh maith le bheith in ann coinníollachaachruthú ar nós nausea agus pian bhoilg dul i bhfeidhm ar ár staid mheabhrach, agus dálaí mar greannaitheacht, luascáin giúise, dílárú, ionsaí, fearg nó níos mó mar thoradh air. Éiríonn sé gníomhach. Má tá tú ag fulaingt …
ادامه ی نوشته Cóireáil Boredom – Trí dheireadhachur le nósanna agus baint deiridh
برچسب‌هاgalat gana tart	دیدگاهتان را دربارهٔ Cóireáil Boredom – Trí dheireadhachur le nósanna agus baint deiridh بیان کنید